Moe Kai: ဆရာဝန် တယောက်ရဲ. ရောဂါများ
ဆရာဝန် တယောက်ရဲ. ရောဂါများ
မနေ.က ကျမ အမျိုးသား ဆေးရုံက သူ.လူနာတွေဆီက သယ်လာတဲ့ ရောဂါပိုးနဲ. ဝမ်းသွားပြီး အန်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ဆိုတော့ လူတွေကို ရောဂါပေါင်းစုံမှ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲလိုကုသပေးရင်းနဲ. ဆရာဝန်တွေမှာလဲ ရောဂါတွေရလာတတ်တာပါပဲ။
ဥပမာ ကျမဆို ဆေးရုံ အရေးပေါ်ဌာနမှာ တာဝန်ကျတုန်းက ဗိုက်အောင့် အစာအိမ်နာတဲ့ ရောဂါရလာပါတယ်။ မရပဲ နေမလား။ အစားအသောက်မှ မမှန်တာကိုး။ A+E rotation ရဲ.အလုပ်ချိန်တွေက တခြားဆေးဌာနတွေလို မဟုတ်။ အချိန်တွေက ကမိုးကမောက် ဆိုတော့ တခါတလေ မနက်စာကို နေ.လည် ၃နာရီလောက်မှ စားရတာလေ။
အခုထိလဲ တချို.ရက်တွေဆို ပထမဆုံး အစာကို ကျမနေ.လည် ၃နာရီလောက်မှ စားရပါတယ်။ ဥပမာ မနက်ခင်း ၈နာရီအရောက် ဆေးရုံသွား ဆေးခန်းမှာ လူနာအမြန်ကြည့်။ နေ.လည်ဘောလုံးပွဲကို အမှီသွားရ။ ကြားမှာ စားဖို. အချိန်မရှိ၊ ထမင်းချိုင့်လဲ့ ထဲ့စရာ မချက်ထားမိတော့ ဒီအတိုင်း ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ. ဘောလုံးပွဲမှာ၊ Halftime လောက်မှ ဘောလုံးသမားတွေရဲ. Energey drinks/ calory snacks တွေ နှိုက်စားရပါတယ်။
အဲဒီလို အလုပ်ချိန်မမှန်တော့ အထူးသဖြင့် ခရီးသွားများတဲ့ အခါတွေမှာဆိုရင်တော့ မနက် မနက်ဆို အီးအီးပါဖို.တောင် အချိန်ကမရှိ။ ဝမ်းကချုပ်လာ၊ ဝမ်းချုပ်တာကြာပြီး ဗိုက်ထဲမှာ အီးအီးတွေပြည့်လာတဲ့ အခါကျတော့ Overflow Diarrhoea လို.ခေါ်တဲ့ ဝမ်းတွေသွားပါရော။
လူနာတွေက ကိုယ့်မျက်နှာကို မကြာခဏ ချောင်းဆိုးထဲ့လုိုက်လို. ရောဂါပိုးကူးပြီး ဖျားရတာ လည်ချောင်းနာရတာလဲ မကြာခဏ။
တခါတလေ အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို. တနေကုန် ဆီးတောင်မသွားအားလို. ဆီးအောင့်ရတာလဲ မကြာခဏ။
လူနာတွေရဲ. သွေးတွေ မကြာခဏ ကိုယ်ကိုပေတာ စွန်းတာနဲ. သွေးကြောင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကြောက်ရတာလဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒီကြားထဲ အခုအားကစားမှာ လုပ်တော့ ကြွက်သားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Myofascial trigger points တွေကို ကုတာ၊ အရိုး အဆစ်တွေကို လျော့အောင် Manipulation/manual therapy တွေ လုပ်တာတွေ များတော့ လက်မက အဆစ်ကလေးနာလာလို. အခု အဲဒီ အလုပ်တွေအားလုံး Physio နဲ.ပဲလွှဲထားပြီး ကိုယ့်လက်ကိုယ် အနားပေးထားရပါတယ်။ Ultrasound scan ကတော့ သုံးရတာများတုန်းဆိုတော့ လက်ကောက်ဝတ်ပါ နာမလာအောင် အတော် သတိထားနေရပါတယ်။
ဒါတောင် စာမေးပွဲတွေ၊ အလုပ်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေအကြောင်း မပါသေးဘူးနော်။
ကဲ ဖြစ်ချင်ဦးဟဲ့ ဆရာဝန် .....။
Google Plus ကို မုန်းတယ်
ဆရာဝန် တယောက်ရဲ. အမှား သင်္ခန်းစာ
ကျမရဲ. အလုပ်သွား ဖက်ရှင်
ကျမရဲ. နာမည်ကြီး လူနာများ